News Collection: पुरुषले नै किन पहिला I love you भन्छन् ?
पुरुषले नै किन पहिला I love you भन्छन् ?
तपाईलाई यो कुरालाई लिएर कहिल्यै कुनै आश्चर्य भएको छ कि प्रेमको सुरुवात किन पुरुषबाटै हुन्छ ? अर्था ‘म तिमीसँग प्रेम गर्छु’ भन्ने शब्द किन पुरुषकै मुखबाट पहिला निस्कन्छ ? एक शोधका अनुसार पुरुषहरु आफ्नो कुरा बिना कुनै ढोंग प्रकट गर्दछन् । त्यसैले प्रेममा पनि उनीहरु यताउता चक्कर लगाउनुभन्दा सिधैँ लाइनमा आउने गर्दछन् ।
डेली मेलमा प्रकाशित समाचारअनुसार पेन्सिलवानिण स्टेट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले भनेका छन्– यौन (Sex) आवश्यकता पूरा गर्ने कुनै पनि रणनीति पुरुषका लागि लाभकारी छ र यसमा प्रेमको घोषणा गर्नु पनि एक हो ।
यी अनुसन्धानकर्ताहरुले आफ्नो अध्ययनका लागि २५ वर्ष उमेर समूहका १ सय ७१ युवक युवतीसँग कुरा गरेका थिए । ८७ प्रतिशतले पहिला महिला नै प्रेममा पर्ने बताए । तीन चौथाईले प्रेमको महशुस र प्रकट पहिला महिलाले नै गर्ने बताए । जब उनीहरुसँग उनीहरुको अनुभवको बारेमा सोधियो तब पुरुषले प्रेममा फसेको केही सातामै महशुस गरे भने महिलालाई यही कुरा महशुस गर्न केही महिना लाग्ने गरेको पाइयो । अधिकांश पुरुषले स्वीकार गरे कि सुरुमा उनीहरुले नै I love you भनेका थिए । जबकी यस्तो भन्ने महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा निकै कम थियो । एजेन्सी